ကျနော်ပစ်ခဲ့တဲ့ ငှက် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Photography » ကျနော်ပစ်ခဲ့တဲ့ ငှက်	53
Posted by N@ng Ghi Ghi Joe Z on Jun 27, 2012 in Photography, Travel | 53 comments
SLR ပြန်မကောင်းသေးပါ …
သည်နေ့ အိပ်ချိန်ထဲက ဖဲ့ပြီး ပြင်ပေမယ့်… firmware ပြဿနာ မကင်းသေးပါ….
ဆိုင်ပို့ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်…
သည်တော့လည်း ..ငါအပြားကြီးပေါ်ကနေ ရသလောက် ရိုက်ထားတာလေး တင်ဖြစ်ပါတယ်…
အလင်းရောင်သာ ကောင်းနေရင် …Zoom မဆွဲဘူးဆိုရင် …အနှီ 5MP ဟာအတော်လေး မဆိုးလှတဲ့ ကင်မလာ ဖြစ်ပါတယ်…
အဲ့သည့် အကြောင်း ကြုံမှ ရေးပါဦးမယ်…
မထင်မှတ်ဘဲ ရိုက်ဖြစ်သွားတဲ ပုံတွေပါ ….
အဲ့သည့်နေ့က …ဘော်တနီကယ် ဂါးဒင်း ဆိုပီး သွားလိုက်တာ …
အဲ … လက်မှတ်ဝယ်တော့မှ သူနဲ့ ကပ်လျက် ဇူး ကိုပါ ၀င်လို့ရသတဲ့ …
သည်တော့ အပင်တွေလျောက်ကြည့် ..ဘာမှ နားမလည်မယ့်အတူတူ အကောင်တွေပဲ လျောက်ကြည့်ဖြစ်တဲ့နေ့ ဆိုပါတော့..
သိတဲ့အတိုင်း အကောင်ကမှ …ငှက် ငှက်မှန်း ခြင်္သေ့ ခြင်္သေ့မှန်း ခွဲသိသေးတယ်…
အပင်နဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ ဗဟုသုတ ကနည်းပါးလေတော့ …
ဘယ်မှာပေါက် ဘယ်လောက်ရှားပြီး ဘယ်လိုတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာ မသိလေတော့ …
အပင်ဘက် သိပ် မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းပါ…
ညနေပိုင်း … ချစ်စရာ့အရွယ် တင်ပါမယ်. ..ပုံ၂၀ကျော် ရထားပြီး …
၂၆ရက်နေ့ည အထိ ..ဖလက်ရ်ှနဲ့ ရှော့ခ်ဝေ့ဗ် …ပြသနာရှာနေလို့ …
ရှိသမျှ ဘရောက်ဇာတွေ …အကုန် ပြန် စစ်နေရပါတယ်…
တခုတော့ ရသွားပြီမို့ စိတ်အေးနေပါတယ်…
ခုရက်ပိုင်း ခရီးက ပုံတွေ တင်ပါဦးမယ်…
စုတ်ပြတ်သတ်လို့ လှည့်မကြည့်ချင်တဲ့ ဒက်စတွတ်ကို ပြင်ရင်း
About N@ng Ghi Ghi Joe Z
View all posts by N@ng Ghi Ghi Joe Z →	Blog
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: ဝါးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
Azzurri says: Higashiyama doushokubutsuen
Round about near focus 4mm to 8mm
ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး says: သေချာကြည့်တော့…
ညလေး says: ကဝေပျိုတို.အသည်းစွဲ…
Wow says: ဂီဂီတို့တော့ ပစ်စရာ စိုင်ကုန်တော့ ဒေါင်းဘက်လှည့်သွားရှာဘီ….
Ma Ei says: ဒေါင်းကလေးပုံလေးတွေလှလိုက်တာ…
ခရီးက ပုံတွေ စောင့်မျှော်ပါဦးမယ်…
မွန်မွန် says: အရမ်းလှတာပဲ..နောက်ဆုံးနှစ်ပုံကို အရမ်းကြိုက်တယ်…
နောက်တစ်ခါကြုံရင် ဒေါင်းကို နောက်ဘက်က ရိုက်ပေးပါလား..မမြင်ဖူးလို့… အော်..ဒါနဲ့..စကားမစပ်…”လျှောက်ကြည့်” လို့ပြင်ပေးနော်…
မှော်ဆရာ says: ဟယ် … သူ တောင့်တပုံကလဲ တမျိုးပါ့လား
mayjuly says: အော် မွန်မွန် ရယ် နောက်ဘက်ကရိုက်တဲ့ပုံ ကြည့်ချင်တယ်ဆိုပါလား..ဟိဟိ ဂီဂီ က ရိုက်တော့ရိုက်လာမယ်ထင်တယ်..ဒါပေမယ့် တူရိုက်တဲ့ပုံ တူမကြည့်ရဲလို့ မတင်တာဖြစ်မယ် … :P
mayjuly says: ဥူးလေး ဂီ … မီး ကြိုက်တဲ့ပုံလေးတွေ ကူးယူခွင့် ပြုပါနော်… အကုန်လုံးနီးပါးပဲ ကြိုက်တယ် ဆိုတော့ .. :D
Khaing Khaing says: SLR ဆိုတာ တို့သိတာ saipan leader လား အဲကောင်ကမရှိတော့ဘူး ဖျက်ပလိုက်ပီလေ ….. ဟဲ ဟဲ တိတာကိုဝင်ရွှီးတာ …….
ပုံထဲမှာ အောက်ဆုံးကဒေါင်းပုံလေးကတော့ အတော်လှတယ်ရှင့် ….. တစ်ကိုယ်လုံးကိုမြင်ရတယ် … ဒ့ါပုံရိုက်တာတောင် ဒေါင်းမှရွေးရိုက်တယ် လူကိုလဲ ဒေါင်းလိုလူကိုရှာမကြိုက်နဲ့ကိုဂီရေ ….. အရှေ့ကလှပေ မယ့် အနောက်ကတော့ …….. ဒေါက်ကလက် ဒေါက်ကလက် ………
mocho says: လက်ဖျားကို ခါ သွား ရလောက်အောင် တော် ပါပေတယ်။ ဒေါင်း မြီး ဖြန့်ထားတဲ့ ပုံက မန်းဂေဇတ် လိုဂိုနဲ့ တထေရာထဲ ပဲ။
ဒေါင်း ကို အမြီး ဖြန့် အောင် ဘာလုပ်လိုက် ရသေးလဲ မောင်ဂီရေ။
Azzurri says: ဘာမှ မလုပ်ရပါဘူးဗျာ …
ပုံအားလုံး ၁ကောင်ထဲပါပဲ …
ဒေါင်းဆိုတဲ့ အမျိုးက အလွန်ပဲများတာ ကလား …
လူတွေ ၀ိုင်းကြည့်တာနဲ့ပဲ ..လှည့်ပတ် က တော့တာ ပဲ
အဲ ..ဒေါင်း အမလေး ပုံ မရိုက်လိုက်ရဘူး ..အဲ့ကောင်
လိုက်ရန်စွာနေလို့ လေ… ဒေါင်းအမ ..လူရှေ့ ထွက်လာရင် လိုက်ဆိတ် တယ်..
သူ့ လူမကြည့်မှာ စိုးလို့ … အဲ့လို ပါ ဆို… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 415
Crystalline says: အဖိုသတ္တ၀ါတွေစိတ်ပုတ်ပုံများနော်…… :-0
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1587
Moe Z says: အံမယ် သဂျီးရဲ့ အဗေတာလောက်မလှပဲနဲ့များ
တော်တော်ပဲများတဲ့အကောင် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 703
marblecommet says: ကင်ပြီး
ကြောင်ဝတုတ် says: ကိုကမ်းရေ…. ဒေါင်းပြီဗျ…ဟိ
mocho says: တို့တွေ များ တိရိစ္ဆာန် ရုံ ခဏ ခဏသွားတာ ဒေါင်း အမြီး ဖြန့်တာ တခါမှ ကြုံ ဖူးဘူး။
mocho says: တို့တွေ များ တိရိစ္ဆာန် ရုံ ခဏ ခဏသွားတာ ဒေါင်း အမြီး ဖြန့်တာ တခါမှ ကြုံ ဖူးဘူး။ အနောက် က ကြည့် ဖူးချင်တာ။
မွန်မွန် says: အဟဲ့..အဖော်ရပြီကွ…(ဒေါင်းအမြီးဖြန့်ချိန် အနောက်က ကြည့်ချင်သူများ)..
Azzurri says: အနောက်ကိစ္စ အတော် စိတ်ဝင်စားသူများသကိုး …
ကျုပ်လား ..အနောက်က ပစ်တော့ ပစ်တယ် ..
char too lan says: တယ်လှသကိုးးးးး
အရင်နှစ်ကရထားတဲ့ ဒေါင်းဖြူကိုမြင်လျှင်.. ဘာပုတယ်ညာပုတယ်ဆိုတဲ့မေလ်းထဲက
ဒါမျိုး ဒေါင်းဖြူစီးရီးလေးနဲ့ တွဲကြည့်ရင် ပိုလှမှာနော် …
မ သွားတယ်ဗျို့ …………. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2243
water-melon says: ညနေပိုင်း … ချစ်စရာ့အရွယ် တင်ပါမယ်. ..ပုံ၂၀ကျော် ရထားပြီး …ဆိုတော့
kyeemite says: ကိုရင်ဂီ..အောက်ဆုံးကဒေါင်းပုံလေး
Azzurri says: ကူးပါဗျာ ဖဲတော့မကစားလို့မသိ
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1789
နွယ်ပင် says: အိုးးးးးးးးးး လှလိုက်တာ ..
ဘဲဥ says: ဒေါင်းကြော်လေးနဲ့ ဘိုက်ခေးရဲ့ မြွေဘွေးသားကြော်လေးနဲ့ ဘီဘီလေးနဲ့ ဆိုရင် အဟေးဟေးးးးးး
manawphyulay says: မီးမီး အဲ ဒေါင်းလေး လိုချင်ရယ်… ၀ယ်ပေး ၀ယ်ပေး ဦးဦးဂီ၊ ၀ယ်မပေးပဲနဲ့ လာမပြနဲ့ နိုလိုက်မယ်။
pooch says: ဓာတ်ပုံပညာနားမလည်လို့ မပြောတတ်ပေမဲ့။ ခံစားရသလောက် လျှောက်ပြောကြည့်မယ်။
ဒေါင်းလေးက ပုံတွေထဲမှာ ကြပ်ညှပ်နေသလိုပဲ။ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မြင်ရတဲ့ sense မျိုး မရပါ။
အောက်ဆုံးတပုံပဲ ကြိုက်တယ်။ ကျန်တာ ဘာလိုနေမှန်းမသိပါ။
ဒါမှမဟုတ် ဦးမိုက် မိုတိုထဲကလို ကိုယ်ကပဲ သူများပြတာကို မမြင်မိတာလား မသိ။ :?
အဲ့ဒါထက်စာရင် ရွှေကျောင်းကိုသာ အကြိုက်ဆုံး။ နာလလည်း မဆိုးပါ။ ရွှေကျောင်းက A ရတယ်ဆို နာလက B ပေါ့။ ဒေါင်းပုံကတော့ C ပါ။ သမင်မျက်လုံးလည်း B ပေါ့။
ညလေးကတော့ A+ ပါ။ ကျိကိုတော့ သနားလို့ A++ ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2139
TNA says: ဂီ့ အခုတလော အတော်ရက်စက်နေပါလား။ ငှက်ပစ်လိုက် စိုင်ပစ်လိုက် ခြင်ပစ်လိုက် သမင်ပစ်လိုက်နဲ့။ ကင်မလာကြီးနဲ့ပြောပါတယ်။ တော်သေး ကျည်ဆံမပါလို့။
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဒေါင်းဆိုဒါ အိုက်ဒလိုအချိန်မှာ အနောက်ဂကြည့်ရင်ဟောင်းလောင်းဂျီးဆိုပြီး
ခင်ဗျားဒို့လည်း ဟန်ရေးပန်ရေးတွေပေးပြီး နောက်ကဟောင်းလောင်းဂျီးမဖစ်ဂျဇေနဲ့လို့
သဘာပတိယောင်ယောင် ပြည်သူ့စစ်ယောင်ယောင် ဝင်ဟောင်ဘာဒယ်
မဂွတ် ထော် says:ှုငှက်လေးတွေအရမ်းလှတယ်
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1952
pan pan says: ဘဂီ ပုံတွေမ,သွားဘီနော်
ရွာထဲက ဒါ့ပုံဆြာတွေ တစ်ယောက်စီ ပိုက်ပိုက်စုပီး ကင်မလာဝယ်ပေးဘာာာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 724
Mon Kit says: ကဗျာဆန်လိုက်တာကွယ်…
အပြာရောင်နဲ့ ဒေါင်းကို ခုမှမြင်ဘူးတယ်…
များသောအားဖြင့် အဖြူရောင် ကိုဘဲသိတာလေ…
ရှမ်းပြည်သား (တောင်ပိုင်း) says: ဂီကိုသူကြီးတင်းနေပါသည်…..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5
Hnin Phyu says: ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့အောက်ခြေကစပြီးပြင်ယူရမယ့် အရာတွေပေါ့။ တဖြေးဖြေးနဲ့ အရာအားလုံးဟာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာပါပြီ။
Azzurri says: ဗျာ …..???????
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3349
အရီး Khin Latt says: ဟဲ့ ဘာ “ဗျာ” လဲ။
သူ က အမှန်ပြောတာ။
မင်း ဒေါင်းက ရှေ့မှာ လှလှပပ အတောင်ဖြန့် က ပြ ၊ နောက်မှာ က မလှပ၊ပေါ်ချင်တာပေါ်။
တို့တွေ နိုင်ငံ ကလဲ အပေါ်က လှလှပပ အတောင်ဖြန့် က ပြ ၊ အောက်မှာ က မလှပ၊ပေါ်ချင်တာပေါ်။
ဟုတ်လား မနှင်းဖြူ။ :D
ရွာစားကျော် says: ကဲ
သိဘီလား…အပေါ်က လှလှပပ အမြီးလေးတကားကား က ပြ ၊ အောက်မှာ က မလှပ၊ပေါ်ချင်တာပေါ် နေတယ်လို့ ပြောဒါ
အောက်ဆုံးပုံလေး ဒေါင်းသွားတယ် ဒါဗျဲ
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ
Hnin Phyu says: ငှက်ပစ်တာနဲ့ ကွန်ပစ်တာ ဘယ်ဟာပိုကောင်းလဲ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1458
Mလုလင် says: ဘာလို့များ ပြင်နေရ သေးသတုန်း ဗျာ …. Mark III ထွက်နေမင့်ဟာ ..။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 500
ahnyartamar says: ငရဲကြီးမှာမကြောက်ဘူးလား…တချိန်လုံး သတ္တ၀ါတွေကိုပဲပစ်နေတော့တာပဲ။
အရီး Khin Latt says: သူကြီး ကို စိတ်နာ၊ သူ့ကို ရိုက် မရ။
ဒီတော့ သူ့ လိုဂို ကို မှန်းပြီးရိုက် လိုက်တာ လို့ အတပ် စွပ်စွဲ လိုက်ပါကြောင်း။ 8-)
MaMa says: ဒေါင်းမြီးစိမ်းလို့ပဲ မြင်ဖူး ကြားဖူးတာ။
ဒါပေမယ့် ဒေါင်းမြီးကတော့ ကျိုးတို့ကျဲတဲ ဖြစ်နေသလားလို့။ါ်ဏ
သားဦး၊မြေးဦး says: ငါအပြားကြီးက အတော့်ကိုရုပ်ထွက်ကောင်းနေပါရော့လား။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 843
ရဲစည် says: ဖွတ်၊ မြွေ၊ လိပ်၊ ဒေါင်း မစားကောင်းတဲ့ ကရင်နဲ့ ကယားဘက်မှာ အဲလိုပြောကြတယ် ကြားဖူးတာပါ….. ဒေါင်းမှာတော့ ဥဒေါင်းနဲ့ ခွပ်ဒေါင်း ၂မျိုးရှိတယ်တဲ့ ဒါလည်း ကြားဖူးတာပါ……. မြန်မာပြည်မှာတော့ အဲဒါထက်ထူးတဲ့ ဖွတ်ဒေါင်းတွေဘဲ ရှိတယ်တဲ့ အဲဒါလဲ ကြားဖူးတာပါဘဲ ဒီတော့ ….. ဟိုတော့
အဲလိုလှပါတယ် ဆိုတဲ့ ဒေါင်းတွေ အမွှေးပြောင်နေချိန် သူများနဲ့ မတူအောင် ရိုက်ပီးတင်အုံးမယ်….
ပြောသာ ပြောတာပါ ကိုယ်တိုင်လဲ ဖင် How long နဲ့ပါဘဲ ….. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 323
ကြည်ဆောင်း says: ဒေါင်းက ခေါင်းကနေ ကိုယ်လုံးအထိ အပြာရောင်ဖြစ်နေတော့ ဒေါင်းမြီး ကလည်း အပြာရောင်နဲ့ ဖက်ရှင်တော်တော်ကျတယ် ၊ တခြား အရောင် ဆိုရင်ရော… ဒေါင်းမြီးကလိုက်ဖက်ညီညီ ဖက်ရှင်ကျမှာလား သိချင်သား ….
Azzurri says: http://en.wikipedia.org/wiki/Peafowl
blackchaw says: ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ပြီး အမြည်းလုပ်လို့ရလားဟင် ????
နေ၀န်းနီ says: ဟေ့ ငါ့ ငုံးလေးကို မပစ်ရဘူးနော်……။ ဒါပဲ……
snow white says: တကယ်ကိုလှပါတယ် တကယ့်ကိုကြိုက်ပါတယ် ကူးလို့မတက်လို့ မရသေးဘူး တကယ်ကို ကူးချင်ပါတယ်ကွန်နရှင်ကကျနေတယ် ပုံလေးတွေကတော်တော်လေးကိုလှတယ်။
Comments By Postတွံတေးအလှူ.... - kyaw hteik - kaung kin pyarPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - kyaw hteikမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - Mလုလင် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - Ma Ma - uncle gyiအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - garuda - Ma Maဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - phoe cho - phoe choကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - uncle gyi - KZအတ္တဆန် - uncle gyi - Ma Maရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - uncle gyi - KZမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - uncle gyi - KZယုံလား? - uncle gyi - KZပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - TNA - မောင် ပေ``ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´ - KZ - TNAကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - TNA - မောင် ပေကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAသူ - ရွှေ ကြည် - KZနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Shwe Ei - Shwe Eiမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - အရီးခင်လတ် - KZဖိုင်နယ်ပွဲ မှာ ပိုင်ရှယ်ဆွဲ (၂၅၇၄) - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သန္ဓေသားအတွက် အဟာရ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥကံဇာတ်ဆရာ စီမံလေသမျှ - Foreign Resident - parlayar 46မင်္ဂလာပါ - ဘဲဥ - jujumaEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities